Alshabaab oo u hanjabay xarumaha ganacsiga UK, USA & Canada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Alshabaab oo u hanjabay xarumaha ganacsiga UK, USA & Canada
22nd February 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Alshabaab ayaa ku hanjabay iney beegsan doonaan xarrumaha ganacsiga dalalka Mareykanka, Canada iyo Ingiriiska.
Alshabaab ayaa baaq muuqaal ah oo ay u direen ragga ka tirsan iyaga ugu sheegeen iney weeraro la beegsadaan goobaha laga dukaameysto ee dalalka Canada, Mareykanka iyo Ingiriiska.
Mid ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab ee ka soo muuqday muuqaalka la soo geliyay baraha Internet ayuu kaga hadlayay si la mid ah weerarkii lagu qaaday September sanadkii 2013 xarunta ganacsiga ee Westgate Mall in loo weeraro goobaha kale ee ay leeyihiin Yuhuuda iyo Mareykanka.
Al-Shabaab ayaa ku soo bandhigay muuqaalkooda xarunta Ganacsiga ee Mall of America oo ku taala Magaalada Mennisota, sidoo kalena ay rajeynayaan in weeraro lagu qaado xarunta Ganacsiga ee West Edmonton Mall ee dalka Canada iyo tan ku taal magaalada London ee Westfield Stratford.
Ruuxa muuqaalka ka soo muuqday ayaa ku hadlayay lahjada British-ka, waxaana uu la sheegay inuu yahay ninka inta badan ka soo muuqda muuqaalada afka Ingiriiska ku baxa ee ay soo saarto Al-Shabaab.
Bayaan ka soo baxay Xarunta laga dukaameysto ee Mall of America ayaa sheegtay inay ka war qabto hanjabaada loo jeediyay iyo in muuqaalka ay soo bandhigeen Al-Shabaab uu ka soo baxay sawirka xaruntooda ganacsi, waxaana ay xuseen inay qaadan doonaan hanjaabo kasta oo qatar ah, ayna xoojinayaan ammaanka rugtan ganacsi.
Muuqaalka ay soo bandhigeen Al-Shabaab ayaa waxaa ka soo muuqda Hogaamiyahoodii la dilay Axmed Cabdi Godane, waxaana muuqaalkan uu ahaa kii u horeeyay ee Hogaamiyahoodii hore lagu arko Video ay soo bandhigeen, sidoo kale waxaa ka soo muuqday Saalax Nabhaan oo sanadkii 2009-kii lagu dilay weerar cirka ah oo uu Mareykanka ka fuliyay Shabeellaha Hoose.
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Jabuuti oo ka degay Baledweyne
Daawo sawirrada degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe